06/07/2022 - 12:17:25 Wararka Gudaha MeMO Staff
Warar dheeraad ah ayaa laga helayaa qarax khasaara dhaliyay oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay mid kamida degmooyinka gobolka Sh/hoose.
Wararka Gudaha 657 MeMO Staff
Jihaadiyiinta ka halgamaya galbeedka Afrika ayaa markale dilay ciidamo ka socda waxa loogu yeero howlgalka Q.Midoobay.
06/07/2022 - 11:16:01 Wararka Gudaha MeMO Staff
Waxaa saacadihii lasoo dhaafay dhacay iska hor'imaadyo dhex maray kooxaha jihaadiyiinta Al-Shabaab iyo maleeshiyaadka DFS.
Muuse Biixi oo sii daayay xubno ka tirsan mucaaridka.
06/07/2022 - 09:48:23 Wararka Gudaha MeMO Staff
Madaxweynaha maamulka 'Somaliland' Muuse Biixi ayaa sii daayey xubno ka tirsanaa mucaaridka maamulkaas oo hore xabsiyada loogu taxaabey ka dib markii ay bannaan bax dhigeen bishii ina dhaaftey. Xubnaha la sii daayey ayaa qaarkood xilal ka soo qabteen xukuumadihii hore ee soo marey maamulka.
06/07/2022 - 09:39:33 Wararka Gudaha MeMO Staff
Dab xooggan ayaa maalmihii u dambeeyay ka kacey deegaanka Gaacidh ee gobolka Sanaag kaas oo khasaare weyn u geystay dhirtii iyo duurjoogtii deegaankaas. Wararka ka imanaya deegaankaas ayaa sheegaya in la hakiyey dabkaas.
05/07/2022 - 16:56:57 Wararka Gudaha MeMO Staff
Waqti xiisado colaadeed oo aad udaran lagasoo sheegayo xuduudda ay wadaagaan dalalka Itoobiya iyo Suudaan ayay kulankii ugu horreeyay yeesheen hoggaamiyaasha labada dal.
05/07/2022 - 16:46:44 Wararka Gudaha MeMO Staff
Hoggaamiyaha DF-ka ayaa markii ugu horraysay ka hadlay siyaasadda uu ku wajahayo dhaq dhaqaaqa jihaadiga Al Shabaab ee dagaallama dalka Soomaaliya.
05/07/2022 - 12:53:06 Wararka Gudaha MeMO Staff
Warbixin cusub oo soo baxday ayaa daaha ka rogaysa sida Soomaaliya ay unoqotay dal ay ku loollamaan sirdoonnada quwadaha caalamiga ah.
05/07/2022 - 12:41:26 Wararka Gudaha MeMO Staff
Boqolaal xayawaanno duurjoog ah ayaa ku bakhtiyay dab xooggan oo ka kacay deegaanno katirsan gobolka Sanaag ee waqooyiga dalka Soomaaliya.
Shirka dowladaha IGAD oo ka furmay magaalad Nairobi.
05/07/2022 - 12:29:50 Wararka Gudaha MeMO Staff
Magaalada Nairobi ee caasimadda wadanka Kenya waxaa ka furmay shir madaxeedkii sanadlaha ahaa ee urur goboleedka IGAD.
05/07/2022 - 11:00:58 Wararka Gudaha MeMO Staff
Ugu yaraan Lix ruux ayaa ku dhimatay labaatan kalana way dhaawacmeen kadib markii nin ku hubaysnaa qori uu rasaas ku furay dad isugu soo baxay dabbaaldegga afartii Luuliyo magaalada Chicago ee dalka Maraykanka.
04/07/2022 - 12:12:37 Wararka Gudaha MeMO Staff
Laba isbuuc kadib markii uu ku dhawaaqay in laga helay cudurka Corona Virus ayuu madaxweyne Xasan Sheekh safar ugu amba baxay dalka dibaddiisa.
04/07/2022 - 10:56:28 Wararka Gudaha MeMO Staff
Mudooyinkaan dambe waxaa si xowli ah dalalka dhaca qaaradaha Yurub iyo Ameerika ugu dhacaya falal toogasho wadareedyo ah kuwaas oo inta badan ay ku hoobtaan dadka rayadka ah.
04/07/2022 - 08:41:45 Wararka Gudaha MeMO Staff
Diinta suuban ee islaamka ah oo loogafo ayaa ah gaalnimo cad oo soohdinta islaamka looga baxo .
03/07/2022 - 14:03:27 Wararka Gudaha MeMO Staff
Wararka naga soo gaaraya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in kolonyo uu hogaaminayey gudoomiyaha gobolka Hiiraan u qaabilsan maamulka Hirshabelle, Cali Cusmaan Jeeyt, lagu weeraray duleedka degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan, halkaas oo khasaare xoogan lagu gaarsiiyey ciidankii uu watay.
03/07/2022 - 12:24:20 Wararka Gudaha MeMO Staff
Booliska Kenya ayaa afar qof oo Shiinees ah oo looga shakisan yahay dil waxay ku wareejiyeen booliiska Itoobiya.
03/07/2022 - 12:13:55 Wararka Gudaha MeMO Staff
Markii ugu horraysay maamulka isku magacaabay 'Jubbaland' ayaa ka hadlay xasuuqii ay maleeshiyaadka Danab isbuucii lasoo dhaafay ka geysteen deegaan katirsan gobolka Jubbada Hoose.
Meydka haweenay 60 sana jir ah oo laga helay Webiga Shabeelle.
03/07/2022 - 12:10:26 Wararka Gudaha MeMO Staff
Webiga Shabelle ee mara gobolka Hiiraan ayaa lagasoo helay haweenay da' ah oo maalmo ka hor ku dhacday webiga.
03/07/2022 - 09:34:12 Wararka Gudaha MeMO Staff
Wararka ka imaanaya gobolka Sool ayaa sheegaya in ciidamada maamulka 'Somaliland' ay howlgal raaf ah ku qabqabteen dad shacab ah.
02/07/2022 - 18:17:57 Wararka Gudaha MeMO Staff
isbuucii lasoo dhaafay dowladda Ruushka waxay aad ugu dhawaatay iney aad uga dib dhacdo gudidda deymaha lagu leeyahay waqtigii lagu ballamay,